Ogaden News Agency (ONA) – Shir Ka Dhacay Guriga Amnesty International oo Looga Hadlay Xadgudubyada Gumeysiga Ethiopia. Daawo Sawiro:
Shir Ka Dhacay Guriga Amnesty International oo Looga Hadlay Xadgudubyada Gumeysiga Ethiopia. Daawo Sawiro:
London: Maxamed Good ayaa kasoo jeediyay Shir saaka ka furmay Guriga Amnetsty International warbixin aad u qotto dheer oo taabanaysa dhinacyo badan oo kamid ah Xadgudubyada ay Ciidamada Ethiopia ka geystaan dhulka Somalida Ogadeniya. Shirkan oo ay kasoo qeyb galeen Haayado Xuquuql Insaan iyo Qowmiyadaha Geeska Afrika gaar ahaan kuwa cadaadiska ka tabanay Taliska TPLF ee Ethiopia.
Qudbadii Maxamed waxa uu si qotto dheer uga hadlay xadgudubyada loo geysto Haweenka Somalida Ogadeniya. Waxa uu sheegay in Gumeysiga Ethiopia ay hub ka dhigtaan Kufsiga iyaga oo kula kaca kufsi haweenka Somalida Ogadeniya. Sarkaal ka tirsan Ciidamada Ethiopia ayaa sheegay sanadkii 2003 mar uu lahadlayay shacabka magalada qabridahare in Haweenaydii looga shakiyo inay xidhiidh la leedahay Jabhada ONLF ama taagero u heysa amaba ehelkeedu kamid yihiin ONLF in haweenadaas la kufsan doono kadibna la dili doono.
Maxamed ayaa soo qaatay dhacdooyin ka dhacay Ogadeniya. Tuulada Kamuda ayaa waxa maalin maalmaha kamid ah waxa soo kordagay Ciidamada Tigreega waxa ayna tuulada kuso fureen xabad iyaga oo halkaas ku arbushay shacabkii tuuladas. Waxay qafaasheen 7 gabdhood oo yar yar oo da’doodu u dhaxeyso 15 sanno illaa 18 sannod. Maalinkii labaad ayaa arroorti waxa tuulada korkeeda geed ku yaala laga helay gabadh la dabay oo meyd ah oo geed kasoo laad-laada kana muuqdo jidhkeeda dhiig badan iyo faro xumeyn. Sidoo kale maalinki xigtay ayaa gabadh kale iyana isla geedkii laga helay iyada oo loo geystay kufsi iyo faro xumeyn. Gabdhihii kale dib looma arag nolol iyo Geeri meel ay ku danbeyeen. Warbixinta gabdhahan oo ah warbixin lagu soo qaatay wargeysyada caalamka sida Wargeyska Daily Mail ee kaso baxa wadanka UK ayaa ah wararka yar ee kasoo baxa Ogadeniya, Caalamkuna kama uu warhayo ama wuu iska indho saabaya waxyeelada haweenka loo geysto Somalida Ogadeniya.
warbixinta Maxamed oo aheyd mid dadka aad u soo jiidatay oo murugo galisay ayaa hadana aheyd warbixin cilmiyaysan oo haayadaha Xuquuql Insaanka lagu baraarujinayo Tacadiga haweenka soo gaadha Ogadeniya. Waxa Maxamed uu sheegay in Ciidamada Ethiopia ay yihiin Ciidamo qaba Cudurka HIV/AIDS oo ah iyagu dadka ugu tiro badan cudurkaas qaba ee ku sugan Afrika Sida ay sheegtay Haayada Cafimaadka ee Aduunku (WHO). Dowlada Ethiopia waxa ay kufsiga u sameynaysa waxa ay rabta in cudurkaas ay ku talaasho Somalida Ogadeniya iyada oo ka warheysa sharafta Haweenku ku dhex leeyihiin Bulshada Islaamka ah ee Somalida Ogadeniya. Haweenka Ogadeniya ayay si gooni ah Ciidamada Ethiopia weeraro u geystaan ayuu yiri isugu jira Kufsi, jidh dil iyo xidhay dheer iyaga oo u adeegsada Sex Slave (addoonsi).
Warbixinta uu maxamed soo jeediyay waxay aheyd mid fiiro gooni ah ku reebtay dadkii shirka kasoo qeybgalay, Waxaana ay dhalisay doodo looga hadlayo sidii looga hortagi lahaa.
Shirkan ayaa waxa kale oo ka hadlay Dr Trvor oo ah Saxiib wanaagsan oo ah nin ka shaqeya arrimaha Xuquuqul insaanka xidhiidh joogta ahna la leh Jaaliyada Somalida Ogadeniya iyo Oramada. Waxa Dr Trevor soo jeediyay in lasii xoojiyo iskaashigan oo ah mid hirgalay oo suurto galiyay Jaaliyada Ogadeniya UK iyo Oromada iyo Axmaarada iyo Qowmiyadaha kale Ethiopia inay siwada jir ah ula shaqeeyaan Haayadaha Xuquuql Insaanka islamarkaasna ay cabashadooda hal cod ku gudbiyaan oo xidhiidho heer sare ah la yeesheen dowladan UK.
Waxa kale oo ka hadlay Masuul ka tirsan Hayada Amnesty International oo halkaas kasoo jeediyay warbixino. Sidoo kale waxa ka hadlay Xubno kasocda Qowmiyada Oromada, Gambella, Jaaliyada Axmaarada iyo Saxiibo kale oo daneynaya arrimaha Geeska Afrika khaastan arrimaha Xuquuql Insaanka.
Shirkan oo ahaa kii labaad ee noocisa ah ee ka dhaca Guriga Amnesty International ayaa waxaa soo qabanqaabisay Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Wadanka UK. Shirkan waxa uu kaga gadisna shirkii hore nidaamka qabanqaabadisa oo aheyd mid wanaagsan sidoo kale waxa shirkan Hagayay Maxamed Sheekh Maxamuud oo ah isagu Khabiir ku xeel dheer Arrimaha Jaaliyadaha iyo nidaamyada shirarka oo muddo dheer aggaasimayay shirarka muhiimka ah ee Jaaliyada Somalida Ogadeniya qabato.